Qaab noocee ah ayey u dhacday caleema saarayay Madaxweynaha iyo ku xigeenka Hirshabeelle (Daawo Sawiro) – STAR FM SOMALIA
Qaab noocee ah ayey u dhacday caleema saarayay Madaxweynaha iyo ku xigeenka Hirshabeelle (Daawo Sawiro)
Xaflad lagu caleema saarayay Madaxweynaha iyo Madaxweynaha ku xigeenka Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa ka qeybgalay madax uu ka mid ahaa Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Munaasbadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa mas’uuliiyiintii ka qeybgashay ka mid ahaa qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlada Soomaaliya,xildhibaano iyo mas’uuliyiin kale.
Sidoo kale waxaa ka soo qeybgalay munaasabadan Madaxweynaha Galmudug Cabdkariin Xuseen Guuleed,Madaxweynaha Koofurgalbeed Shariif Xasan Shiikh Aadan iyo Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Beesha Caalamka ooh ore u soo dhoweysay maamulkan cusub ee Hirshabeelle ayaa ka mid ahayd mas’uuliyiintii ka soo qeybgashay xafladan caleemasaarka waxaana ka mid ahaa ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay Michael Keating,wakiil ka socday Midowga Afrika,danjiraha ururka Jaamacada Carabta Maxamed cabdulaahi idiris,safiirka dowlada Shiinaha iyo mas’uuliyiin ka socotay urur goboleedka IGAD iyo dowlada Ethiopia. Dhammaan mas’uuliyiinti ka hadashay xafladan caleema saarka ayaa soo dhoweeeyay maamulka cusub ee Hirshabeelle.
Madaxweynaha Koofurgalbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa u hambalyeeyay maamulka cusub ee Hirshabeelle waxana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in maamulkan u ku soo biiro maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka mid ah madaxdii ka qeybgashay ayaa ku amaanay shacabka reer Jowhar martigelinta shirka isagoo soo xusuusiyay dadkii ka qeybgalay shirka in magaalada Jowhar ay ahayd magaalo 12 sano kahor soo dhoweysay dowladii kumeelgaarka ahayd ee Cabdulaahi Yuusuf Axmed.
Madaxweynaha Galmudug Cabdkarin Xuseen Guuleed oo horena goobjoog uga ahaa doorashadii Madaxweynaha iyo ku xigeenka Hirshabeelle, waxana uu ugu hambalyeeyay Madaxweynaha Hirshabeelle booqashadii uu ku tegey magaalada Beledweyne.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo qudbad ka jeediyay xaflada caleema saarka ayuu ugaga mahadceliyay madaxda ka soo qeybgashay munaasabada caleema saarka waxana uu sheegay in shacabka reer Hiiraan inay diyaar u yihiin in ka qeybqaataan dhismaha maamulka Hirshabeelle.
“Waxaan si dhaqso ah u soo dhisi doonaa xubnaha Aqalka Sare wadatashi kadib sidoo kale waxaa ay oday dhaqameedyada ay soo xuli doonaan xubnaha u tartamaya baarlamaanka hoose iyadoo doorashadana ay ka dhici doonto Jowhar,”ayuu yiri Madaxweyne Cosoble.
Ugu dambeyntii waxaa ka hadlay munaasabadan Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxana uu ku tilmaamay in maanta ay tahay maalin weyn oo taariikh u ah dhammaan ummada Soomaaliyeed.
“Howsha aan u dabaaldegeyno waa mid si wadajir ah loo qabtay waana howl si wadajir ah loo qabtay mana jirto cid si gaar ah u sheegan karto.”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweyne Xasan Shiikh ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka waxana uu ku sheegay inuusan raali ka ahayn in maalin ay dib u dhacdo doorashada ka dhacaysa baarlamaanka iyo kan madaxweynahaba, waxana uu ugu baaqay guddiga doorashooyinka inay xooga isugu geeyaan sidii waqtigii loo qabtay doorashada aanay dib ugu dhicin.
Waxa uu ku amaanay Madaxweyne Xasan Shiikh Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulahi Cosoble booqashada uu ku tegey magaalda Beledweyne, waxana uu sheegay inay taasi tusaale u tahay sida ay shacabka Beledweyne sida ay u soo dhoweeyeen wafdiga madaxweynaha iyo niyad samida ay muujiyeen in maamulkan dhaqangalo.
Munaasbaadan ayaa waxaa ka soo qeybgalay kooxda muusiga ee ciidamada Booliska kuwaasoo wadooyinka magaalada Jowhar ku maray gaardi iyadoo dadku ay u soo daawasho tageen.
NISA oo beenisay Warqad lagu faafiyay baraha Bulshada.